‘छोरी पढाऔँ अभियान’मा पर्वत समाज जापानले सहकार्य गर्ने
पर्वत नेपाल–संवाददाता । ‘छोरी पढाऔँ अभियान’मा पर्वत समाज जापानले सहकार्य गर्ने भएको छ । विभिन्न कारण विद्यालय जना नसकेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने उद्देश्यले स्थापना भएको अभियानमा पर्वत समाज जापानले सहकार्य गर्ने भएको हो ।
छोरी पढाऔँ अभियान’ले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जानवाट बञ्चित भएका बालबालिकालाई सहयोग गदै आएको छ । उक्त अभियान कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङ निवासी सामजिक अभियान्त प्रेम विश्वकर्माले संञ्चालन गदै आउनु भएको छ ।
पर्वत समाज जापानका अध्यक्ष सुजन जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले हाल तिन जना बालिकालाई सहयोग गर्ने भएको छ । संस्थाका सल्लाहकार महेश श्रेष्ठले २ जना र अध्यक्ष जोशीले १ जना किशोरीको पढाईमा सहयोग गर्ने बताउनु भयो । अन्य सहयोगका लागि दाताहरुको खोजी भईरहेको अध्यक्ष जोशीले बताउनु भयो ।
सहयोग गर्न चाहाने महानुभावले पर्वत समाज जापानमा सम्पर्क गर्न संस्थाले आग्रह गरेको छ ।‘छोरी पढाऔँ अभियान’ अन्तरगत सहयोगदाताले मावि स्तरिय (+2) सम्मको सम्पूर्ण पढाई खर्च बहन गर्ने जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ।
नेपाल स्वयंसेवक संघ पर्वतद्धारा गुप्तेश्वर गुफा क्षेत्रमा सरसफाई 55
पर्वतमा समुदायमा कोरोना संक्रमण देखिएन, नमुना परीक्षण गरिएका सबैको रिर्पोट नेगेटिभ 81
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हर्नुस् राशिफल 67
पर्वत वेल्फेयर सोसाईटी यूकेद्धारा पहिरो पीडितलाई नगद सहयोग 87
पर्वत अस्पतालमा शुरु भएको डायलासिस सेवाको मुख्यमन्त्री गुरुङ्गद्धारा उद्घाटन 54
नेपाल लाइफ कुश्माको परिचय तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न 60
पर्वतमा समाजबाद अध्ययन प्रतिष्ठान गठन, अध्यक्षमा आचार्य 1147
ट्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपालीको परिवारलाई १ लाख आर्थिक सहयोग 115
तपाईको आजको भाग्य कस्तो छ ? हर्नुस् राशिफल 95
पर्वतमा मास्क नलगाउनेवाट एकैदिन २१ सय संकलन 96